Inotungamira demokrasi nzira yakapfupika kubva kuvharwa nekudzora kwehupfumi: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 15 May 2020	• 24 Comments
Direct demokrasi ndiyo mhinduro kubva kune zvino kutyisa uko hurumende yeDutch yakapinda nyika yedu. Chimiro chegutsaruzhinji umo vanhu vanosarudza vamiririri vavo kuburikidza nepo online (yakachengetedzwa) kuvhota. Vanhu vane kurongeka zvakare nehunhu hunhu vanovhoterwa kumusoro. Iye munhu anenge aine mavhoti mazhinji anokunda chinzvimbo chemakurukota. Izvi zvakafanana anoenda kumutungamiriri.
Mitemo inofanirwa kuverengerwa uye kupihwa kuvanhu mune yakajeka siginology yekubvumira kana kusatenderwa. Mitemo inopihwa zuva rekupedzera uye inogona kuvhota kunze kana kuti inovandudzwa patsvage kana zuva racho ropera. Mutemo wakanaka unoramba uripo. Mutemo wakaipa unonyangarika.
Unogona kuvaka demokarasi yakananga hurumende iripo. Iyo fomu yakangwara yekupikisa iyo inogona kuve kongiri pakarepo. Kwekunyarara uye nekukurumidza kumukira. Iwe haumiriri sarudzo, asi ronga sarudzo yako zvakananga online.
Inogona kuve kongiri nekukasira, nekuti unochengetedza zvivakwa zvemukati zvisina tsarukano, asi kutsiva vatungamiriri kuburikidza nekuvhota online. Mapaundi ekorona anotsiviwa nemaneja kubva kuvanhu.
Sarudzo dzekuvhota dzinopa kuchengetedzeka uye dzinogona kutonga sarudzo dzemavhoti. Izvo zvingave zvakanaka kuita izvi kuburikidza ne blockchain kana kuburikidza nekubatanidza kune yako DigiD, asi nekuda kwekuti isu hatifanirwe kutarisira kuti hurumende inokanganisa kushandira pamwe, tinogona kuronga izvi pachedu. Iyo FVVD yatopa ipulatifomu iyi (www.dvd.nl).
Tsamba iri pazasi inoitsanangura zvakadzama uye iri tsamba yemaketeni yaungatumira zvakananga kushamwari dzako kana vaunozivana:
Nepfupi nezvehurumende iripo uye nehungwaru yekuvharira takataura nezvayo.
Zvishoma nezvishoma, munharaunda yangu, vanhu vazhinji uye vari kutanga kuona kuti hurumende inoda kushandura nzanga yakazara. Izvo "zvine hungwaru kuvhara" zvishoma nezvishoma zvinoshandurwa kuita chinogara nekusingaperi, apo iwe unofanirwa kudzosera sununguko yako. Iyo itsva yakajairwa inova mita nehafu yenharaunda uye iwe unofanirwa kuzvibhadharira iyo pachako. Ini ndaneta nazvo.
Teerera, makambani anogona ikozvino kuhaya anodhura mazano kuti awane mazano ezvekumisa bhizinesi ravo pamatanho matanhatu. Iwe unobheja pane iyo mutengo weti yakanamatira kune iyo; tag yemutengo wekambani (nekuti ingangoda kubvumidzwa kwepamutemo kwemamita 1,5 emamita) uye mutengo weti kumutengi (nekuti mumwe munhu achafanira kusheedzera izvo zvinosungirwa mita imwe nehafu uye kudonha kwemari).
Izvo zvingangoita kuti iri kuuya covid-19 yekudzivirira rinongozove rekumanikidza. Iwe unofungei nezve izvozvo?
Iwe unofungei ... Kunze kwemubvunzo wekuti kana yakadaro yekudziya yakaedzwa zvakakwana zvakakwana, uye zvakaenzana kunze kwemubvunzo wekuti kana isu tisiri kuda iyo mita imwe nehafu dhizaini kubva munharaunda. Ndinofunga Rutte akaomarara uye ivo havanyatsoteerera kune vanhu vari kuratidzira imomo muThe Hague.
Ini handizive zvaunofunga nezvazvo, asi tekinoroji ingangoshandiswa kuongororesa matanho ese. Iyo tekinoroji uye data hombe zvinongouya, nekuti kune makambani akawanda kwazvo anogona kuwana rinonakidza nibble zvakare. Kana kuti unozviona zvakasiyana? Ini ndinofunga vanhu vazhinji vanoto shanda kumakambani makuru anopa ICT mhinduro kana vamiriri vehurumende vanoona kuti vanogona kuramba vachibhadhara imba yavo nekuchengeta mhuri yavo. Vanhu avo vanogona kuona kuti chimwe chinhu hachina kunaka, asi kana zvasvika pakufanira kusarudza, vanhu vazhinji vanosarudza imba yavo nebindu.
Iwe neni tinoziva chaizvo kuti iyi nzanga nyowani icharatidzika. Vezvenhau nenyika vanoramba vachidavira kuti kutengesa kuri madikanwa uye nenzira yainotangwa iri nhanho nhanho, kuti vanhu vazhinji varambe vachitenda kuti zvinonyatsofanira kuve nehutachiona hwe corona. Izvo hazviite kuti ndifare.
Ndiwe here wakadaro? Kuti maitiro acho anoenderera mukufambisa mafambiro kubva 'kumanikidza bhanhire' kuenda 'kungorega itsvo dzichitumbuka' uyezve rinotevera wimbi rinouya. Mushure menguva yekujaira mita imwe nehafu uye zvishoma kamuri yekushandisa, vezvenhau, nyanzvi (RIVM's yekugadzirwa kwehuwandu) uye vezvematongerwo enyika vachatiratidza kumutsidzirwa kwehutachiona hwe corona, mushure mezvo kuiswa kwechikamu chinotevera chechikamu. package ichambundirwa nevanhu.
Zvakanaka, ini handirangariri kana iwe wakataura izvozvo, asi vanhu vazhinji uye vari kuwana ruzivo nezvekuti isu tinoridzwa sei (kunze kwedzidziso dzenhema). Tinogona kuona zvakawanda pamusoro penzira yekuti vacccin ine ngozi, sei patent yeMicrosoft yaanoda kutipa chitupa chedhijitari yekudzivirira, sei Bill Gates anodyara mune midhiya uye indasitiri yekudzivirira, maapplication anogona kushandiswa sei kutitarisisa. Ini ndinofunga isu tiri kukurumidza kusundirwa muhuwandu hwekutonga dhijitari. Ini ndinofunga kuti ruzivo rwakakosha zvakanyanya, nekuti kana ukasaziva njodzi iri kumhanyira pauri, hausi kusvetuka parutivi nenguva. Nekudaro, panofanirwa kuve nenhanho inotevera. Tinofanira kuuya nemhinduro.
Ini ndinofunga kana iwe neni tikasaita chero chinhu, isu tichaenda kunharaunda uko kusisina mari yakawanda, nzanga ine mapikicha, kamera uye data hombe vanoziva chaizvo kwatinenge tiri kana kuti isu tainayo tembiricha chaiyo (hapana covid-19) uye isu tese tinosangana naye. Nhanho inotevera ndeyokubatanidza iyo yese data kune rudzi rwemaki system. Handisi kumirira izvozvo, ndizvo here? Uine kana usina chikero chakakwana, iwe unogona kana kusabuda kunze, nechitima kana mundege kana zvimwe. Icho chichava madhouse! Iyo yekubatanidza yeiyo yese data kune inogoneka diji chiratidzo uye chinongedzo kune yako yedhijitari bhangi zviyero zvinonakidza. Rudzi rwejere rakavhurika.
Ini ndinofunga tiri kufambiswa muwebhu, uye China iri kupa muenzaniso wekuti senyika unogona kumanikidza vanhu kuiteedzera kwazviri. Handidi kugara muChina. China inoratidzawo kuti munhu akamira achipikisa anosiiwa sei. Ndiwo mhedzisiro mhedzisiro yehurongwa hwakadaro. Kana kuti unozviona zvakasiyana? Pakupedzisira, masasi ano pfugama kwazviri, zvimwe nekuti vazhinji munharaunda ivo pachavo vanoshandira zvikamu zve "hurongwa". Kana iwe uine basa muIT uye iwe uchigovera database software kana iwe unopa kamera masisitimu, kana iwe uchishanda semukuru anoongorora kana semupurisa, iwe achiri kusarudza mari yaunotambira. Ndozvazvinoita.
Munguva pfupi yapfuura mumwe munhu akati: "Ipapo ini ndinokanda smartphone yangu kure kuti ndibude mugadziriro". Asi tiri kuenda kunguva iyo kutora chikamu munharaunda kunozoita zvisingabviri pasina digiD kana pasina eHerkenning (yemakambani). Ndozvatove zvakadaro. Izvo zvakafanana zvichaitika neiyo itsva corona tekinoroji. Kana iwe wakarasa yako smartphone, iwe hauchazokwanisazve kupinda mune supermarket. Ipapo iwe unongova iyo spool.
Iwe unofunga kuti zvichasvika kune izvo here? Ini ndinofunga kudaro ... Uye ipapo iwe unogona chete kurarama kana iwe uine yako yekudyarwa gadheni, asi ipapo iwe zvakare unofanirwa kutora yako mbeu kubva mazviri, nekuti iyo yekugutsikana iwe pachako ingangovewo yakarambidzwa munguva yakareba. Huye, ini handizive nezvako, asi ini handina nguva yeizvozvo uye handinzwe senge.
Ini ndinofunga danho rinotevera nderekuti iwe hauchazofanirwa kunge uri munzvimbo dzeveruzhinji kana usati warwara. Uye iyo "data hombe" pamwe ichaitawo basa mune izvi. Kana iyo App yakadaro ichizotaura gare gare kuti wagamuchira chidziviriro, suo rekupaza supermarket rinokutendera kuti upinde; zvikasadaro. Muchikamu chekupedzisira, yakadaro app inogona kunge ichatsiviwa nehujigital hunhu hwakabatana nemuviri wako kana chimwe chinhu. Handizive, iwe unonzwa kuti Microsoft iri kushanda pamusoro payo ne patent kana chimwe chinhu (haisi kurangana, ndakaverenga paGoogle patent saiti). Uye zvichave chete zvakakwana kana ivo zvakare vanobatanidza yako bhengi chiyero kune izvi zvese. Brrrr .. Pasina chinguva yekutiza kunze kwekunge wasarudza kurarama 'musango', asi bye ..
Tinogona kupururudza zvatinoda; Tinogona kupopota kuti hatidi zvese, asi zvinoita sekuchema mugwenga. Iyo yakawanda inoenderana ne 'system'. Ini ndinofunga yave nguva yekufunga nezvazvo: Kana iwe usingakwanise kurova 'em, pinda' em.
Ini ndinofunga isu tinofanira kuuya nekongiri mhinduro dzinogona zvakare kuve nekumbundirwa nevaya vanoshandira 'iyo hurongwa'. Tinofanira kuuya nekongiri uye zvinogoneka zvigadziriso zvinoita kuti vanhu vasarasikirwe nezvimwe, asi kuti vane zvavanenge vataura. Isu zvino tave kutenderwa zvizere pane zvakatemwa zvisarudzo kubva kumusoro. Iyo iripo yezvematongerwo enyika system inotimanikidza kugamuchira izvo sarudzo pasina chero nzira yekutora chikamu. Ini ndinofunga izvozvo zvinogona kuitwa zvakasiyana. Izvo zvinoda chaizvo kuchinja izvozvi. Inonyatso kundibvisa.
Ndakaverenga nezve mukana wekutendeuka nyore zvinhu netekinoroji imwe chete mazuva ano, pasina izvi kutenderedza nzanga yose pasi. Izvo hazvitsvaki kukurumbira kukuru kumukira kana shanduko. Wese munhu anogona kungoramba vachiita izvo zvavanoita. Ndinoda kuziva zvaunofunga nezvazvo, nekuti ini ndinogara ndichifarira maonero ako.
Chinhu choga chinoshanduka isarudzo yesarudzo. Makurukota nemakurukota ari kuudza korona iyi uye vari kusheedzera kuburikidza nemitemo pasina kubvumidzwa kwevanhu nekukasira vanofanira kuudza vanhu. Makurukota anofanirwa kutsiviwa nevamiriri vakasarudzika vevanhu (avo vanonyatsomiririra vanhu kwete korona). Ivo vanozviti yakananga demokrasi. Izvo zvinotozosimudzirwa naElon Musk (of that Tesla mota). Haisi mukomana benzi ...
Kana izvo zvichikwanisika kuburikidza nedemokrasi yakananga uye kana inogona kuunzwa nekukurumidza, ndinofunga isu tinofanira kutanga taita izvozvo nekusimudzira. Mukudzvinyirira kwakananga kwakadaro, vanhu vanosarudza vamiriri vevanhu online. Saka iwe unokwanisa kuve mumiriri iwe pachako kana ruoko muvatsvaki uye nzira yekuvhota inovimbisa kusarudzwa uye kukura mukutsigira. Zvishoma senzira yekuvhota seHolland Got Talent uye zvimwe zvirongwa zveTV. Tekinoroji iripo. Chandinonzwisisa ndechekuti chingangoitika.
Saka vamiririri vakasarudzwa vakasarudzika vanofanirwa kurerutsa mitemo nekuvaratidzira kuvanhu kuti vatenderwe kana kuongororwa. Kubva kuzviuru zvemirau, kujekesa, kubva kuwanda kusvika kumhando. Kutungamira kuruzhinji rwevanhu. Ndofunga zvakangwara chaizvo.
Tinogona kumirira kusvikira yakatemerwa vaccination mitemo inotibvumira kusarudza kutora iyo yekudzivirira kana kuenda kujeri yedhijitari kana isu tinogona kutora nguva yacho. Ini ndinofunga tinofanirwa kushandisa mukana wedambudziko iri kuti shanduko iitike. Chinja nzira yatinoda! Direct demokrasi inogona kutsiva iyo iripo yemagetsi mamiriro kuburikidza neyekuvhota online system mukati memwedzi mishoma. Zvakanaka: Pakupedzisira chimwe chinhu kongiri panzvimbo yeavo ese ehembe dzepfungwa pane internet rese.
Ini ndinoda chaizvo kuziva zvaunofunga nezvazvo! Ndinofunga ikozvino ndiyo nguva yekugadzira rutsigiro rweizvi. Ngatitaure nezve izvozvo pachako. Tinogona kuzvivaka sezvo tese takaita kuti Facebook rive hombe. Iwe unoita izvozvo nekugovana ... kuratidza vanhu vakakukomberedza. Ndokusaka ndakafunga kuti ndinosangana newe.
Tarisa uone pano, yakanyatsotsanangurwa ipapo: https://www.fvvd.nl/ uye unogona kukurumidza kusaina chikumbiro chinoratidza kuti isu tinoda chaizvo kuita izvi pamwe chete. Izvo zvinongofanira kuenda kuhutachiona kana iwe ukandibvunza.
Zvakanaka, ini ndinogona kuzvinzwa kubva kwauri.
(PS pamwe zano: tumira iyi email kune dzimwe shamwari)
Kune mibvunzo yakawanda pamusoro pekuti hurongwa hwematongerwo enyika hwakadai huchashanda sei, asi pfungwa ndeiyi:
kuti inogona kuitwa nekukurumidza
kuti ndiyo fomu yakasununguka yerusununguko
kuti iwe unogona kuita iyo yemari system yakasimba zvakare
Iyo yekupedzisira inogona kuitwa, semuenzaniso, nekuunza digital (uye pamwe pepa) guilder. Iyo guilder inozovharwa neyakajaira iyo kuderera kwemari iripo mapikisi. Icho chinongedzo chinoumba iyo "goridhe" itsva. Icho chinogona kunge chiri goridhe repanyama kana chinogona kunge chiri bitcoin. Iwe unogona kukurumidza kugadzira mari yedhijitari uye yekubatanidza ne bitcoin (se "goridhe standard") zvakare inokurumidza kumisikidzwa. Izvi zvinotevera zvinoshanda kune zvese: vanhu vanosarudza.
Iyo yakawanda inosarudza! Uye ndiko runako rwekutonga. Direct demokrasi yaisazombove yakamboitika kubva kare, nekuti yaizongotora nguva yakawandisa. Nehunyanzvi hwemazuva ano, unogona kukurumidza kupa vanhu zvekutaura. Kuburikidza neapuro app uye nekudhinda bhatani, unovhotera mukwikwidzi uye nechishandiso chimwe che batani raunotendera kana kuramba zvauri kukumbira.
"Ehe, asi izvo hazvigoneke, mutemo wakanyanya kunetseka kune izvozvo uye kune mitemo yakawandisa kune izvozvo!Izvo chaizvo uye ndizvo chaizvo zvinoda kuchinja. Vatungamiriri vatsva vanofanirwa saka kuve vanokwanisa kurerutsa, kutaurirana zvakajeka uye nekugutsa vanhu. Ruzhinji runogara ruchitonga.
Rega ikanyure mukati, ifunge nezvayo, asi usatora iyo yakareba. Tinofanirwa kubuda mumamiriro ezvinhu aripo nekukurumidza uye tinoda kuti vanhu vanotitonga iye zvino vabude muchivako. Verenga zvimwe www.dvd.nl uye bvunza mibvunzo yako pasi 'Mubvunzo & mhinduro'.
"..Uye kana ukazvinyararira izvi vana vako vachazotevera"
photos photos: https://www.facebook.com/Nantes.Revoltee/photos/
Iwe unofanirwa kutora kana kuramba iyo Covid-19 yekudzivirira kana ikave yekumanikidza? Kuitei?
Zvisungo zvinopesana neHurumende Nyaya dzaJordie Zwarts zviri kupinda mumatani, asi hapana chiri kuita
Tags: kufamba, democracy, chaipoipo, direct, Featured, Forum, fvvd. bato, lockdown, sangano, vashumiri, paIndaneti, chikwiriro, revolution, vhoti
ANP: Poll: VVD inokura kune makumi mana nemakumi matatu zvigaro kuburikidza ne corona maitiro
Vhoti vanoonga maitiro ehurumende ehurumende, ayo anonyanya kutsigira mubatanidzwa mukuru weVVD, zvichienderana neongororo ichangobva kuitwa neI&O Research. Bato rorusununguko rinogona kuverenga makumi mana nemaviri zvigaro, nepo mamwe mapato ese achitsiga pasi pezvigaro gumi nematanhatu.
ANP John de Mol… kuvimbika kupopota kana kuparadzira? Imwe nguva yakawanda yekuratidza zvinopesana.
hurongwa hwese hwekuvhota haufanire kuvimbwa pavanoti zvigaro makumi mana nemasere vanongofungidzira kuti ivo vanokwanisa kuwana huwandu hwezvigaro vari makumi mana nemasere. Vazhinji vagari veMadurodam vachiri kutenda munzira yekuvhota uye bhokisi revavhoti.
Zvakanaka ini ndinogona kukuudza iwe kubva kune yakavimbika sosi kuti kune vhoti bhoti hunyengeri uye kuti haina nani kupfuura avhareji bhanana republic. ANP inobatanidzwawo mukuverenga mavhoti
"Matauro anopfuudza huwandu hwese hwekukurumidza kuverenga kune ANP (Algemeen Nederlands Persbureau). Zvichienderana nehuwandu hwevhoti idzi, NOS ichaunza mhedzisiro pamanheru ezuva resarudzo. "
"Vashandi veMapurisa vanowedzera mhinduro panzvimbo dzekuvhota. Ivo vanoita izvi pahwaro hwemishumo yepamutemo yenzvimbo dzekuvhota. "Mhedzisiro yacho inoverengeka nerubatsiro rwechishandiso chekuverenga (kazhinji Tsigiro yeSoftware), pamabato uye padanho rekutsvaga."
Joseph Stalin - 'Avo vanovhota havana chavanofunga. Vanoverengera vhoti vanosarudza zvese. '
Ini ndinofunga kuti Mol achiri shamwari kana kanenge kari bhizinesi raBerlusconi. Freem times pakati pavo, pamwe chete vanovaka ramangwana rakajeka ivo pachavo nehama dzavo, kwete zvevanhu.
idd it benne kabbalists, Berlusconi anozivikanwa kuva nhengo yeinozivikanwa PII lodge. Iwo imba imwechete iyo yaisanganisira kuronga mashandiro eGladio muItaly yakauraya vanhu vazhinji pasi pechiratidzo che "Red Brigades". Ivo vanogara vachiziva nzira yekunyora zvakanaka uye kutengesa yavakajairwa vanofungidzira.
Riffian akanyora kuti:
Freemasonry Yakaguma Western Society
Vazhinji vanokosha vekuMadokero vanoita sarudzo, vezvematongerwo enyika, vezvehupfumi, uye mauto emahara ndeve nhengo dzenzvimbo yakavanzika kana vanokurudzirwa uye vanowanzotongwa nenhengo dzakadai… Ichi ndicho chiumbwa chesatanist chatinowana mune dzimwe dzimba dzeFreemasonry, dzakadai sePII. Taa ndakabatanidzwa muCalvi Affair muItaly mumakore makumi manomwe ekutanga - kuvanzika, kudhindwa, kushandisa simba zvisina kufanira, kupinza, huori hwevakuru uye, pazvinenge zvakakodzera, zvinoita sekutourayiwa.
Kana iwe uchida kuve mutungamiri weboka rakakura, unoita izvo pasina kufarira uye kwete (yedhijitari) yemari. Pangosvika mari kutenderera, zvinhu zvinofamba. Hurumende dzazvino dzinofungidzira kuti dzisawana mari zhinji, asi kuburikidza nemusuwo wekuseri chinyorwa chakasiyana chose.
Kupa vanhu mari yemahara hakusi kuzobatsira chero, mari inopa simba panoshandiswa nguva. Sevateveri vadiki vanozopururudza zvimwe.
Zvese zviri muchadenga izvi zvinokura zvemahara uye mitemo yezvisikwa yakafanana kune wese. Vazhinji vevanhu uye vatungamiriri vawo vakatsiva iyi mitemo nemirairo yejojo.
Wese munhu wepanyika pano ane kodzero yekuva neyake yekurima ivhu. Pachave nezvakawanda zvekudya zvekuti zvakawandisa uye hapana anozofa nenzara.
Hapana masango anoda kutemwa kuti hupfumi huwedzere. Kana iwe uchida kuenda kune imwe nyika, unoita chibvumirano chekuchinjana kwechinguva. Kukura kwehupfumi inzombe, kukura kwehupfumi kuzvida.
Zviri kufarira munhu wese kuti izvi zvinoramba zvichishanda nekuti isu tinoziva zvichaitika kana tikazvirega.
Oo shit izvi zvaitika zvisati zvaitika 😉
Ini ndinofunga iyi ipfungwa yakajeka .. Ndokumbirawo mutsigire nomoyo wese.
Iva nemibvunzo miviri:
Iwe haugone zvakare kuisa ino system kune yakananga democracy kuburikidza nereferendamu?
Uye ungava sei nechokwadi chekuti ino yakavimbika uye haina kunyengedzwa?
Ini zvakare handisi kufarira mari yedhijitari kana kuwedzeredzwa kwedhijitari renharaunda zvakazara.
Iyi gadziriro inogona kushandiswawo mune yakawanda "analogous" nzira?
Zvese zvakanaka uye zvakakosha kucherechedzwa mune zvakataurwa. Nekudaro, pane maitiro kana tsamba sekunyorwa kwenyaya ino uye tsamba yacho yatove yakateedzerwa nekuendeswa kune vamwe? Kana iwe uine mamwe mazano kana nezve tsamba kana kuti yekusvika kune yakatarwa boka, usazeza kuigovana. Ichi chiitiko chidiki, uye sezvo hutachiona hunopararira zvakanyanya, meseji iyi inogona zvakare kuparadzira exponentially. Mazhinji mhinduro kumamwe (anodzorwa oposition nzvimbo) anoratidza kuti manzwisisiro emukati evazhinji vanoda shanduko. Naizvozvo ikozvino yave nguva yekutora boka iri kubva kune mamwe marara. Kutevedzera tsamba uye kuigovera nemubvunzo kuti ugoverane zvimwe inzira imwe chete. Saizvozvo, "rimwe bepanhau" rakagoverwa pazuva reRibvumirano, iro raitove rakadhindwa. Ndinovimba nemoyo murefu kuti vanhu 930 vakasaina chikumbiro vakatorawo tsamba iyi ndokuigovera kune vamwe.
Bvumirana, zvino yave nguva chaiyo yekutora danho nekusimudzira nekushingaira. Isu hatibvi mune izvi nekungopindura kuzvinyorwa, asi nekukurudzira chaiko vanhu.
Ingoisa pano, iwe ugere neicho chimeric chako, asi iwe waitoziva izvozvo .. Ona pazasi.
Coronavirus Vaccine Patent https://patents.justia.com/patent/10130701 kuti Attenuated Coronavirus ishandiswe seVaccine. Chimera Protein Patent https://patents.justia.com/patent/8828407 Chimera Shumba musoro, Mbudzi muviri, Shato muswe "She-Goat" chaizvo zvinoreva "Mwaka weChando" aka Capricornus the Saturdaynian Goat of the Winter; Chimera imhuka inouraya yakagadzirwa kubva kune dzimwe mhuka, chaizvo chinonzi chinonzi Chiitiko.
Uyezve, Gireadhi chinhu zvakare chakavanzika kubva muchiHebheru. Zvinoita kunge zvinoreva zvinotevera.
Gireadhi (ndiye mugadziri wetsiva, iye wekudzivirira VaTrump vanoda mazana matatu emamiriyoni ehutachiwana kuti aunzwe nemauto. Saka uri muchiuno, nekuti hapana chakaedzwa pane chero chinhu, uye zvechokwadi hachigadzirwa nemafungiro akanaka kwazvo. Ona zita rekambani. Rakadudzirwa naGoogle. uye zvichireva pazasi.
Murwi weuchapupu chaldee zita rakafanana neGaleed muchiHebheru. Ose ari maviri akaisa chiratidzo chehukama pakati paJakobho naRabhani. Gen 31:47 (haisi yekurayira vanhu Bhaibheri, asi kududzira)
Papa Francis Encyclical Laudato Si (pepa rekudzidzisa) Zvinodaidzira kuuraya vanhu zviuru mazana matanhatu;
Iyo induvidual yakaremara nekuuya takatarisana kumeso necrafti saka inotyisa haigone kutenda kuti inopenga. Sodhoma, Phedophile, 33 degree Freemason. J Edgar Hoover, FBI director.
Alter ndipo pavanoda kukutora, kwete kuroora.
Saka zviri nyore kuona kuti vakaipa sei vanhu ivavo, kana uchigona kuvadaidza izvozvo.
Sezvo "De Andere Kranr" akadhindwa nekuparadzirwa sekopi yakadhindwa muNetherlands, bepanhau rakabuditswa zvakare kuGermany umo vanopikisa vanogona kuverengerwa nezvezvazvino matanho.
Kuparadzira rudzi urwu rwenhau zvechokwadi kuchabatsira vanhu vazhinji kuti vasanyanya kudzvinyirirwa nevezera ravo kana vachiona manzwiro avo ehurema achisimbiswa kusvika padanho rakakura kupfuura zvavaifunga pakutanga. Zvirokwazvo iyi inogona zvakare kuve chiteshi chekutorwa kweboka iri revanhu, asi pane chimwe chinhu chipenyu pakati peboka riri kukura revanhu. Ndokusaka ikozvino kuri madikanwa kusimudzira chirongwa chekutungamira kweruzhinji rwekutonga pakati peboka rakakura revanhu. Izvi zvinoda munhu wese anoverenga izvi kutevedzera tsamba uye kuendesa kune, semuenzaniso, kero gumi mudunhu rako rekutanga nemubvunzo kana vachidawo kutumira tsamba. Kana izvi zvikaitika inova kukura kwakakura mukuziva kwekuchinja / imwe nzira senge demokrasi yakatwasuka. Kuzivikanidzana neicho chinhanho chekutanga kuti zviitwe nevanhu, seizvo vatengesi vazhinji vanopupurira.
Rangarira iwe, kusuwa kwekudzokera kune zvekare zvekare hakuchakwanise kuve kunogoneka nekuda kwekuti chirongwa icho chakapa mukana wekufambisa nzanga mune mamiriro matiri izvozvi. Saka ndapota bvisa iyi pfungwa kunze kwepfungwa dzako. Sarudzo ndeyekugamuchira chitsva chatinogona kusangana nacho nekuverenga mufoni kana kukumbira imwe nzira uye kuve wekutamba nhamba 5, 15, 500, 50000 kana 1 miriyoni ye "nzira yekugadzira kufamba".
Tora chiitiko chidiki nhasi uye uone kuti vangani vanhu vaunogona kusvika. Zviitei kune vechidiki vezera ravo uye ravo ramangwana vana nevazukuru !!! Saka: https://www.fvvd.nl
Ndiani anosaina mitemo uye Royal mitemo?
Zvirongwa zvemitemo zvinogamuchirwa neParamende neRoyal Mitemo zvinosainwa-(zvakapikiswa-saina) naMambo uyezve negurukota rinoshanda kana sekisheni yenyika. Ipapo ivo vanobva vashanda. Chiratidzo chekupokana chinoratidza kuti haasi Mambo asi gurukota iri (rezvematongerwo enyika) rine mutoro
Willy Tog ane izvo zvaitwa zvakare…
Chaizvoizvo, kuti ivo vakanyatsochenjera vakaisa mukati mebumbiro, vakarairwa nevatungamiriri zvakafanana.
Vanoda mumwe nemumwe uye vanoshanda pamwechete, asi vanhuwo zvavo havaudzwi izvozvo. vane chisungo chakasimba chakasimba nemumwe.
Pane imwe, imwe iripo. Zvichiri zvakanaka samambo kusabhadhara mutero, capital capital nekutenda uye simba, uyezve nebasa rako rakagarwa nhaka. Iko hakuna kudikanwa kwekunyorera kuitira kuti vari nani vavhoti vasamira mukana. Zvino kukurudzirwawo kusarudza kugadzwa kwavanosarudza vari mumiririri wake, vachimubatira. Ndiani anodzora mambo mumamiriro akadai? Ndokusaka paine vateveri veworive vakawanda. Zvakanaka inobhadhara kuve fan fan. Orange yaimbove bato rezvematongerwo enyika ravakaitawo nenzira dzakangwara kuti mambo asasarura. Kunyangwe zvakadaro ?? . Feudal system muzana remakore re21. Bvisa iyo. Saina chikumbiro izvozvi!
Kutyisidzira kwebhomba akanyora kuti:
Hongu, iyi ingave iri nzira yekukurumidza kupindira - chero vanotsigirwa vakakwana vanowanikwa. Uye ndinofunga kuti zvinotora zvinopfuura izvo zvakataurwa chinangwa chechikumbiro.
Icho chokwadi ndechekuti izvi zvakare zvakavakirwa pakuonekwa kwekubatana-sarudzo. Chero zvazvingaitika, demokrasi inogara ichidzvinyirira vashoma vasina kuwana "nzira" yavo. Mukuwedzera, demokrasi yakananga ine ngozi zvakare kana vezvenhau vasina kwavakarerekera. Uye iyo yekupedzisira haina kunyanya kuitika muNetherlands.
Mufananidzo wekuti zvinhu zvingaite sei zvisingaonekwe unoonekwa mumutsara we "The Orville" mwaka 1 episode 7. Kungoti iwo "mutsetse mukuru" mutsara hazvireve kuti haugone kuve neshoko rinobatsira…
Ini, zvakare, ndine chokwadi chekuti muchina wemagetsi unoshanda pamwe chete kana mavhoti akakwana akatorwa, asi zvakanaka. Kwete kupfurwa iko kwakaipa. Zvakadaro, zvinonzwa zvisinganzwisisike kusaina chikumbiro. Iyo ichiri iyo manzwiro ekuti iwe unoziva kuti vanhu vane simba pamusoro pako uye kuti hapana chaungaita kunze kwavo. Kana ukabvuma izvozvo, nei vanhu vachipindura kuchikumbiro chako… ..
Chikumbiro hachizi chinhu kunze kwekuwongorora kwekuti vangani vanhu vanoda kutanga uye kuratidza kuzvipira kwavo. Iyo zvirokwazvo yakaunzwa kuneamamnn kubva kumatongerwo enyika aripo, asi nekusaina kwakakwana chiratidzo che: "Uye ikozvino tave kuenda" takananga kuripo kwezvematongerwo enyika kurongeka.
Chinhu chekutanga chekuita, chokwadika, iko kuomesa-kurova kudzokorora kwezviri pane tube. Ihwohwo hunyengeri nekuti iwe unobvisa kupindwa muropa kwevanhu panguva imwe chete, asi iye zvino kana kuti hatimbofa uye tichaona kuti vangani vanhu vanozvipira kuenda kuzasi kweshanduko.
Iwe unogona kuzvidzivirira kubva mukutadza. Muenzaniso: yekumanikidza yekudzivirira. Ngatitii ruzhinji rwunoda kuvhoterwa nekuti rwakasundwa nevezvenhau uye vakatosvika pakutenda kuti ndizvo zvakanaka. Iwo mutemo unopesana nebumbiro. Bumbiro iro rine mimwe mitemo yekutanga yakasununguka parusununguko uye kodzero yekuzvisarudzira Haufanire kudaro (zvinoitika nemutemo wemazvino) kupasa mitemo inodzikisira kana kuyedza kudzikisira bumbiro (zvichibva kurudyi kodzero yevanhu).
Kune avo vanoverenga pamwe uye vanonyatsoda shanduko yevana vedu nevana vavo. Iwe ungangodaro watosaina chikumbiro, asi hazvireve kuti iko kuchinja. Iwe unoda here kuita chimwe chinhu uye kwete kungogovana zvinyorwa nemavhidhiyo ari akawanda kana mashoma kungosimbisa kwezvinozivikanwa. Zvinokwanisika here kupa "kufamba" chimwe chinhu chakawedzerwa ne, semuenzaniso, kumisa vhidhiyo yekukurukurirana umo zvinhu zvinogona kukurukurwa nekukurumidza uye kupi, semuenzaniso, isu tinogovera mabasa kuti aite zvinhu zvinoita kuti zvichinje shanduko chaiyo. Kana kuti pane mamwe mazano ekusvitsa boka rakakura rekutarisirwa. Kune vanhu vazhinji vakashinga (kusanganisira Martin) anoratidzwa mumavhidhiyo ane ma guts ekupa zvinhu zvinhu. Yasvika nguva yekuti tizvitarise kune avo vanhu uye tora iyo Gauntlet. Ivo vakafanirwa nerutsigiro uye izvo zvinoda kusiya maitiro anongoitika. Saka ini ndinoda kuti ndiite vhidhiyo kutaura, asi z2 mibvunzo:
* avo vanoda kutora chikamu
* pane mamwe mazano
tichaverenga izvo maitiro acho
Ndine chokwadi chekuti vanhu vachatora danho iri. Kukurukurirana kwevhidhiyo kunogona kunge kusingaiti, nekuti iwe unofanirwa kunge uri online panguva imwe chete, asi iwe unogona kugadzira kufamba nekuzvimirira iwe uye nekutaura zvakajeka. Iwe unogona chaizvo kuita vhidhiyo uye uitumire pano. Uye zvekare hongu isu hatitendeukire kune iyo hurumende social media mauto (anonzi zvakare "troll mauto"). Uyai nepfungwa uye kunyanya kuita kongiri.
Kutanga kwakakosha kungaita kana vanhu vakatanga kugovana webhusaiti uye voedza kunyengerera vamwe.
Zvinonzwika zvikuru, isu hatisi vavengi vevanhu sezvavanorondedzerwa pasi pehutongi hwaStalin.
Isu tiri “vanhu” vacho. Saka isu hatifanire kuenda kugurug uye tirege kutya nazvo, isu tine vanhu vevanhu
Zvekare zvakanyatsonatswa ndezvekuti iwe uri munhu-unovenga kana usingade kupfeka mask, zvakare pasi peshoko remuvengi wevanhu, ivo vakafunga nezvazvo ipapo pasi paStalin uye ikozvino pasirese yenyika. Ndinovimba vanhu vanouya nezvirongwa. Iwe uchavaita kuti uwane ivo kuti varwe navo, saka tanga wasimudzira kuziva, kuratidzira kwenhau nezvimwe, une vhoti yangu
Munhu anoita kuti vanhu vazive haasi muvengi wevanhu, asi "shamwari yevanhu", kwete zvichienderana neGulag
Vamwe vevaverengi vanopa mazano ekusvika kune vateereri vakakura kana mienzaniso yezviitiko zvinogona kudzokorodzwa kuwedzera vateereri. Zvekare, kugovera zvakawanikwa pawebhusaiti hakubetseri kuzadzisa chinangwa chedemokhasi chakananga. Semuenzaniso, ini ndinoreva nzvimbo dzandinogara ndichishanyira http://www.fvvd.nl Kune vamwezve vanoita izvi here? Kune vaverengi vanoita zviitiko kunze kweInternet kukurudzira ruzivo rwepfungwa yekudaira zvakananga nedandemutande yakabatana. Kana zvirizvo, zviigovane uye zvimwe zvinogona kutora nzvimbo. Ndiri kuona kuti huwandu hwevanhu vakasaina ndiina 1181 (ndinotenda pamberi peichi chiitiko) uye izvo zvinofanirwa kuve zvakawandisa kakawanda. Sezvandakanyora kare, ikozvino ndiyo nguva nekuti kuchengetedzwa kwevezera kuri kudonha. Vanhu vane matumbu ekunzwa uye vari kutsvaga imwe nzira. Pane chero munhu angaayeuka mawoko aLance Armstrong? Zoiest zvakare yakabatwa pane dzakawanda nguva dzakawanda kupfuura dzaimbofungidzirwa. Zvinotapira zvingave zvakare zano, asi ndine chokwadi chekuti pakati pevanhu gumi nemazana nemaviri vakasaina ikoko zvirokwazvo mazano ari nani. Vamwe ngavazvinzwe.
bertusjanssen akanyora kuti:
Unoziva zvakaitika kuna al-Qadhafi? Simudza yako yemari uye yega inosvikika vanhu vakaita senge vanhu vane pfungwa, kunyengerera vanhu kuti vavape ivhu rakasimba nekuzivisa kuti imba yavanogara mairi ndeyavo zvinhu. kuva kana ari uye vazivise ivo vasina chikwereti .ndiri paFB uye panofanira kunge paine zvakawanda, kubudirira nekambani.
« Zvisungo zvinopesana neHurumende Nyaya dzaJordie Zwarts zviri kupinda mumatani, asi hapana chiri kuita
Kuomesa kwaTrump kuenda kuChina ndiko kutanga kwekudonha kwedhora nekudonha kwehupfumi? »
Kushanya kwakazara: 2.422.121